Chroma-isi (na-akpọ "green ihuenyo") mmetụta ndị a staple na video mmepụta. Ihe nke a utịp ke bụ ekwe ka ị na-eme ka ndabere n'azụ ihe omee uzo otú i nwere ike ebe ahụ omee n'ime a dị iche iche gburugburu ebe obibi karịa a studio.
Na mbụ, ihe kacha mma i nwere ike ime iji melite ogo nke gị igodo bụ ka mma otú ị gbaa ha. Ebe a na-asa isi mmepụta iwu:
-Eme ihe nkiri kwesịrị dịkarịa ala 10 ụkwụ n'ihu green ihuenyo. Nke a-ezere ìhè si ndabere "na-awụfu" gburugburu ha ahụ ma ọ bụ n'ubu.
Ke ofụri ofụri, adịghị ajụ onyinyo na green ihuenyo. Abụ nnọọ anya égbè ụkwụ
The green ndabere kwesịrị ka ire ụtọ dị ka omume. Agba bụ mgbe mma karịa ákwà; zere wrinkles na folds.
The green ndabere ga-udo were were, ma si n'akụkụ ịdịnyere na n'elu na ala. M na-agbalị ka nwere ndị na-acha akwụkwọ ndụ ndabere ngosi n'etiti 40-50% larịị na waveform ileba anya.
E nweghị mmekọrịta dị n'etiti otú ndabere na-udo na otú gị eme ihe nkiri na-lit. Isiokwu a ga-egosi na.
Ìhè gị ndabere maka ire ụtọ. Ìhè gị eme ihe nkiri maka nkiri.
Echegbula onwe gị banyere ndị nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ndabere jupụta eku. Ọ naanị kwesịrị ka kpamkpam gburugburu n'ọnụ gị eme ihe nkiri. Ahihia mattes na-eji tufuo junk gburugburu n'ọnụ ya.
The green ihuenyo image na-mgbe enịm n'elu ndabere. Ị nwere ike ebe ma na green ihuenyo ma ọ bụ ndabere image n'ime Primary storyline. M na-ahụ ka ọ dịkwuo mfe etinye ndabere ke Primary storyline, n'ihi na ọ na-eme ka edezi green ihuenyo image mfe. Ma nke a bụ kpere nhọrọ onwe onye.
Họrọ green ihuenyo clip.
Site mmetụta Nchọgharị> Keying Atiya, abụọ-pịa Keyer mmetụta, nke na-emetụta ya ndị họrọ clip. (I nwekwara ike ịdọrọ mmetụta n'elu nke clip, ọ bụrụ na ị chefuru họrọ green-ihuenyo clip mbụ.)
Atụla egwu ma ọ bụrụ na gị ihe oyiyi anya weird - anyị ga-idozi ya.
Pịa Sample Agba akara ngosi. Nke a na-enye ohere ezi-na-n'iji ya gee ntị nhọrọ nke ndabere agba.
Na green-ihuenyo image, ịdọrọ iji họrọ onye nnọchiteanya ngalaba nke ndabere. M na-agbalị iji nweta nso ihu, ma ọ bụghị nnọọ nso nke na M mmadụ na mberede họrọ rụrụ isi ma ọ bụ akpụkpọ.
Gị isi kwesịrị anya mma ozugbo. Ọtụtụ n'ime oge, ị nwere ike eleghị anya akwụsị ebe a. Ma, e nwere atọ ndị ọzọ mgbanwe nwere ike ime ka gị isi anya ọbụna mma:
Nhicha na matte
Pịa Matte button na-egosipụta gị isi dị ka a na-acha ọcha ná mgbada na nwa ndabere.
Ihe mgbaru ọsọ gị bụ ime ka mgbada siri ike na-acha ọcha, nke pụtara opaque, na ndabere siri ike nwa, nke pụtara uzo. Kpatụ jupụta oghere na Edge Ịnọ sliders ruo mgbe gị isi anya siri ike. (N'ihi na n'ezie ọjọọ igodo, ị ga-mkpa nwekwara ike ịgbanwe Agba Nhọrọ, kwuru n'okpuru ebe a.)
Ọ bụrụ na onye onu bụ kwa akpọ, ma ọ bụ mkpa aka, pịa n'ọnụ akara ngosi.
Mgbe ahụ, pịa na ịdọrọ a akara si ná mgbada ka ndabere ke Kanvas. Ịdọrọ midpoint mmịfe (ebe m cursor bụ) ruo mgbe onu anya ndị kasị mma ọ pụrụ. Dị iche iche video formats-eme ka a mfe (ProRes), mgbe ndị ọzọ (HDV, AVCHD)-eme ka a nnọọ ike. Okè agaghị ekwe omume --eme ihe i nwere ike.
Final Cut enye anọ ọzọ Tweaks na ala nke keyer iyo:
Atọ ndị mbụ na-e hichapụ emezighituri gbara igodo - agụ FCP X Help faịlụ ịmụta otú ndị a na-arụ ọrụ. (M na-eji agba Nhọrọ ngwaọrụ ọcha ahụ oké ọchịchịrị gbara isi m na-eji ihe atụ mgbe e mesịrị na isiokwu a.)
Ìhè Kechie Ma, ọ bụ aesthetic. Ihe ọ na-eme bụ ngwakọta na agba site na ndabere n'ime n'ọnụ nke mgbada, na-eme dum isi anya ọzọ "organic," dị ka ma ọ bụrụ na mgbada na ndabere bụ n'ezie na otu ohere.
Nke a bụ aghụghọ mmetụta, ma nnọọ jụụ.
Twirl ala Ìhè Kechie na ịgbanwe ego mmịfe ma na-ekiri ihe na-eme. Ịdọrọ ndị ọzọ sliders lee gburugburu, hụ ihe na-eme. The mma banyere ihe a ọnọdụ bụ na mgbe ya anya ọma gị, ọ dị mma. Ego nke mmetụta bụ kpam kpam gị. Cheta, Ìhè Kechie nanị na-emetụta n'ọnụ nke mgbada na a ga-eji subtly.
Mgbe ị na-eme, ị nwere oké achọ isi!
Hichapụ oyiyi na A ahihia nkpuchi
Mgbe ụfọdụ, Otú ọ dị, ị na-adịghị, ah, ikekwe, ndị kasị mma green-ihuenyo image-arụ ọrụ na. Ebe a, ka ihe atụ, e nwere ọkụ ngwá mgbada, na a nnọọ inadequately udo green ihuenyo na ndabere. (Sụọ ude ... nke a bụ nanị ndiọi.)
Ozugbo ị sere isi - nke bụ film-ekwu okwu n'ihi na-eke a green-ihuenyo ogbugba, dị ka m kọwara n'elu - na-enweta ya na-achọ dị ka o kwere omume, n'ebe ahụ bụ otu ihe nzọụkwụ: agbakwunye a mkpofu matte ka tufuo niile mkpofu gburugburu gị eme ihe nkiri.
Ozugbo ị ga-esi gị isi na-achọ dị ka ị nwere ike - nke na nke a bụghị ihe niile na ihe ọma - ịdọrọ Nkpuchi mmetụta (mmetụta> Keying> Nkpuchi) n'elu nke green-ihuenyo clip.
IHE: nkpuchi mmetụta mgbe niile kwesịrị-atụkwasịkwara mgbe Keying mmetụta, nke mere na Nkpuchi bụ n'okpuru Keyer na soja.
Mgbe ahụ, ịdọrọ ọ bụla nke anọ okirikiri ike a udi dị otú ahụ na gị na mgbada image na-ẹdude n'ime ya, na ihe niile ị chọrọ na ewepu bụ n'èzí. Ebe a, ihe atụ, anyị wepụrụ ìhè guzoro, na nsọtụ nke green ndabere na tearing na elu nke ihe oyiyi ahụ. M na hụrụ nke a Nkpuchi mmetụta na-arụ ọrụ kasị mma mgbe etinyere a ejikọrọ clip.
Otú ọ dị, na nnukwu mmachi nke nkpuchi mmetụta bụ na ị naanị isi ihe anọ na-arụ ọrụ. Nke ahụ bụ ebe a free mmetụta na-abịa na, nke enye gị ohere ike n'ebe dị anya ọzọ mgbanwe shapes na ya. Ọ dere site Alex Gollner na dị na ya website - alex4d.wordpress.com/fcpx/ - m nwere ike ikwu ya mmetụta ukwuu.
The chroma-isi nyo na FCP X-enye ohere ka anyị na ike ụfọdụ ịtụnanya mmetụta. Nwere fun na-egwuri egwu ya.
Nke a bụ isi nkuzi banyere Apple Final Cut Pro X, ọkachamara video edezi software. Otú ọ dị, ọ bụrụ na video edezi bụ ihe ọhụrụ nye gị, tụlee Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka Mac. Nke a bụ ike ma mfe na-eji ngwá ọrụ maka ọrụ dị malite si. Download free ikpe version n'okpuru.
Top 10 Famous Movies mere site Final Cut Pro
> Resource> FCP> FCP X: Mepụta a Chroma-Key (Green-ihuenyo) Mmetụta